Oovimba bohlalutyo lobuchwephesha-Funda ukuRhweba
tag: Uhlalutyo lwezobuchwephesha
Ixabiso likaCardano liyaqhubeka nokuHamba okuMnyama emva kwePullback ukuya kwinqanaba le- $ 0.10
Ukuhlaziywa: 16 Septemba 2020
Uhlalutyo lwamaxabiso e-ADA-Septemba 16
Ixabiso leCardano okwangoku liyehla kwinqanaba lokuxhasa kwi- $ 0.08, kwaye ukuba inqanaba alinakubamba ixabiso, ixabiso linganciphisa ukuya kuthi ga kwi-0.07 kunye nexabiso lexabiso le- $ 0.06. Ukuba inqanaba lenkxaso le- $ 0.08 liphethe, ukudityaniswa kwamaxabiso kunokuqhubeka.
Amanqanaba okumelana: $ 0.10, $ 0.11, $ 0.13
Amanqanaba enkxaso: $ 0.08, $ 0.07, $ 0.06
Intshukumo ye-bearish eqale ngoSeptemba 02 ifumene inkxaso kwi-0.08 yeedola ngoSeptemba 05. Uxinzelelo lwabathengisi lwaba buthathaka; Oku kuqatshelwe ngokudityaniswa kwexabiso kwi-0.08 yeedola. Ixabiso le-ADA libuyele umva ukuze liphinde libone inqanaba elaphukileyo kwi- $ 0.10 kwaye ixabiso laqala ukudibanisa kwinqanaba elifanayo. Izolo, abathengisi baqokelele umfutho ongaphezulu, kwaye ixabiso lehle nge-3.42%. Namhlanje, ukwehla okuthe kratya kwexabiso kuthengisiwe njengoko abathengisi belawula intengiso ye-ADA xa kuvulwa imakethi.
Itshathi yemihla ngemihla ye-ADA, nge-16 kaSeptemba
Ixabiso leCardano okwangoku liyehla kwinqanaba lokuxhasa kwi- $ 0.08, kwaye ukuba inqanaba alinakubamba ixabiso, ixabiso linganciphisa ukuya kuthi ga kwi-0.07 kunye nexabiso lexabiso le- $ 0.06. Ukuba inqanaba lenkxaso le- $ 0.08 liphethe, ukudityaniswa kwamaxabiso kunokuqhubeka. Nangona kunjalo, amanqanaba okumelana neCardano amaxabiso anokuhlangabezana nawo ziidola eziyi-0.10, $ 0.11, kunye ne- $ 0.13. Ixabiso lihlala lingaphantsi kwamanqanaba enkxaso anamandla kwaye lithengisa ngaphantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA.
ICardano i-bearish kwitshathi yeeyure ezi-4. Ukwahlulwa kwamanqanaba emfuno ye- $ 0.11 kwandisa uxinzelelo lwe-bearish ukuya kwi-0.10 yeedola kwaye oku kunciphisa amaxabiso kwinqanaba lemfuno kwi-0.08 yeedola. Inqanaba lebango elikhankanyiweyo libambe kwaye amaxabiso abuyela kwinqanaba lokumelana ne- $ 0.10. Okwangoku, ixabiso liyancipha kwinqanaba lokuxhasa kwi- $ 0.08.
Itshathi yeeyure ezi-4 ze-ADA, nge-16 kaSeptemba
Ixabiso le-ADA lithengisa ngaphantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA apho eyangaphambili ingaphantsi kwexesha elizayo eqinisekisa intshukumo ye-bearish kwintengiso ye-ADA. Ixesha lesalathiso soMbane oNxulumene naMandla lingaphantsi kwamanqanaba angama-14 akhomba phezulu ukubonisa uphawu lokuthenga olunokubuyela umva. Ixabiso linokubuyisa inqanaba lenkxaso kwi $ 40.
tags ADA, Marketing, Uhlalutyo lwezobuchwephesha
Ixabiso leCardano: Ngaba inqanaba lenkxaso liza kuthi xhaxhe nge-0.08?
Ukuhlaziywa: 8 Septemba 2020
Uhlalutyo lwamaxabiso e-ADA-Septemba 08
Ixabiso lisondela kwinqanaba lexabiso le- $ 0.08; ukuba inqanaba elikhankanyiweyo likhuselwe ziinkunzi, ixabiso linokubuyela ukujongana nenqanaba lokumelana ne- $ 0.01, $ 0.11, kunye ne- $ 0.13. Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo zazingenakukhusela inqanaba lemfuno kwi-0.08 yeedola, ukwehla kwexabiso le-ADA kuya kuqhubeka kumanqanaba enkxaso kwi-0.08, i-0.07 yeedola, kunye ne-0.06 yeedola.
Imakethi ye-ADA yafumana ukuphuka kwe-bearish kwi-0.11 yeedola kwinqanaba leemfuno ezimbini zangaphambili kwiiveki ezimbini ezidlulileyo. Ixabiso leCardano lehlile ukuvavanya inqanaba lemfuno kwi-0.10 yeedola ngo-Agasti 27. Ixabiso labuyiselwa umva ukuvavanya inqanaba elaphukileyo le- $ 0.11. Amanqanaba okumelana namandla athintele ukonyuka kwamaxabiso. Abathengisi babuyela kwintengiso ye-ADA ngokunyuka koxinzelelo kwaye ingqekembe iyaqhubeka nokuhamba kwayo kwi-bearish ukuya kwinqanaba le- $ 0.08 emva kokungena kwi-0.10 yeedola.
Itshati kaCardano Faily, Septemba 08
Ixabiso likaCardano lidlulile kumanqanaba amabini enkxaso ashukumisayo aya kwicala eliphantsi kwaye ithengisa ngaphantsi kwamaxesha e-9 EMA kunye namaxesha angama-21 e-EMA. Ixabiso lisondela kwinqanaba lexabiso le- $ 0.08; ukuba inqanaba elikhankanyiweyo likhuselwe ziinkunzi, ixabiso linokubuyela ukujongana nenqanaba lokumelana ne- $ 0.01, $ 0.11, kunye ne- $ 0.13. Kwimeko apho iinkunzi zeenkomo zazingenakukhusela inqanaba lemfuno kwi-0.08 yeedola, ukwehla kwexabiso le-ADA kuya kuqhubeka kumanqanaba enkxaso kwi-0.08, i-0.07 yeedola, kunye ne-0.06 yeedola.
Iinkunzi ziye zalahleka kulawulo lwexabiso likaCardano ngoSeptemba 01 emva kokudityaniswa kwamaxabiso amafutshane. Iibhere zonyusa uxinzelelo lwazo kwaye oku kubonisiwe kwitshathi yeeyure ezi-4 ngokwenziwa kwamakhandlela angaphezulu. Ixabiso liphula amanqanaba emfuno ye- $ 0.11 kunye ne- $ 0.10, isiya kwinqanaba lokufuna kwi-0.08 yeedola.
Itshathi yeeyure ezi-4 zikaCardano, Septemba 08
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ixabiso lentengo le-ADA lenza iphatheni yetshathi engezantsi enokubangela ukunyuka kwamaxabiso. I-ADA izama ukuwela ii-EMA ezimbini ngaphezulu; ngoku ithengisa phakathi kwamaxesha e-9 ee-EMA kunye namaxesha angama-21 ee-EMA. Ixesha lesalathiso samandla osondeleyo kwi-14 lingaphezulu kwamanqanaba angama-40 akhomba phezulu ukubonisa uphawu lokuthenga.
tags Cardano, imarike, Marketing, Uhlalutyo lwezobuchwephesha